Gerard Pique oo shaaca ka qaaday xilliga uu ka fariisanayo ciyaarista kubadda cagta – Gool FM
Dajiye November 17, 2019
(Barcelona) 17 Nof 2019. Daafaca kooxda Barcelona ee Gerard Pique ayaa wuxuu shaaca ka qaaday xilliga uu ka fariisanayo ciyaarista kubadda cagta.
32 jirkan ayaa ka mid ah daafacyada ugu fiican ee soo maray taariikhda Barcelona, wuxuuna xirfadiisa kooxda koowaad ay soo bilaabatay sanadkii 2008, kaddib markii uu kaga soo laabtay naadiga Manchester United.
Gerrard Pique ayaa ku dhawaaqay inuu ka fariistay ciyaaraha caalamiga ah kaddib markii uu xulkiisa qaranka Spain kala qeyb galay koobkii adduunka 2018 ee lasoo dhaafay.
Haddaba Pique ayaa wareysi uu ku bixiyay shabakada caalamiga ah ee “Goal” wuxuu ku sheegay:
“Xilliga aan ka fariisanayo kubadda cagta? waxaan jeclaan lahaa inaan ku soo gabagabeeyo xirfadeyda kubadda cagta sida ugu wanaagsan ee ugu macquulsan”.
“Xilligan la joogo, waxa kaliya ee aan diiradda saarayo ayaa ah, in sanad walba uu ii yahay sanadkii iigu dambeeyay ee garoomada, waxaan doonayaa in wax walba oo aan haysto aan siiyo kubadda cagta” ayuu hadalkiisa ku soo xiray Gerrard Pique.
Si kastaba ha noqotee, qandaraaska Gerard Pique ee Barcelona ayaa dhici doona xagaaga 2022, waxaana ilaa iyo haatan uu u ciyaaray xilli ciyaareedkan 15 kulan, isagoo dhaliyay kaliya hal gool.